Uyila njani, ubhale kwaye upapashe i-ebook yakho usebenzisa iGoogle Docs | Martech Zone
Ukuba wehlile kwindlela yokubhala kunye nokupapasha i-ebook, uyazi ukuba ukungqubana neentlobo zeefayile ze-EPUB, ukuguqulwa, uyilo kunye nokuhanjiswa ayisiyonto ityhafileyo. Kukho inani lezisombululo ze-ebook phaya eziza kukunceda kwinkqubo kwaye ufumane i-ebook yakho kwiincwadi zeGoogle Play, i-Kindle kunye nezinye izixhobo.
Iincwadi zeencwadi ziyindlela emangazayo yokuba iinkampani zibeke igunya lazo kwindawo yazo kunye nendlela entle yokufumana ulwazi olunokubakho ngamaphepha okufika. Iincwadi zeencwadi zibonelela ngolwazi olunzulu ngakumbi kunephepha elilula elimhlophe okanye isishwankathelo se-infographic. Ukubhala i-ebook kukwavula abaphulaphuli abatsha ngokupheleleyo ngamajelo osasazo e-eBook kaGoogle, Amazon kunye neApple.
Kukho itoni yabenzi bezigqibo phaya abafuna izihloko ngokubhekisele kumzi mveliso wakho kunye nokufunda iincwadi ezinxulumene noko. Ngaba abo ukhuphisana nabo sele bekhona? Kukho ithuba elihle lokuba ungafumana i-niche entle kunye nesihloko onokuthi usipapashe ekungekho namnye umntu okwangoku.
Eyona nto ilunge kakhulu, awunyanzelekanga ukuba uqeshe uyilo lwe-ebook, ukuthengisa, kunye nenkonzo yokunyusa… unokuvula nje uxwebhu olutsha usebenzise Indawo yokusebenzela kaGoogle akhawunti kwaye uqalise ukuyila, ukubhala nokuthumela ngaphandle ifayile eyimfuneko oyifunayo ukuze upapashe i-ebook yakho nangayo nayiphi na imithombo yolwabiwo olusisiseko kwi-intanethi.
Amanyathelo okupapasha i-Ebook yakho
Andikholelwa ukuba ukhona umahluko obonakalayo kwisicwangciso sokubhala i-ebook njengayo nayiphi na enye incwadi… amanyathelo ayafana. Iincwadi zequmrhu zinokuba mfutshane, zijolise ngakumbi, kwaye zibonelele ngeenjongo ezithile kunenoveli yesiqhelo okanye enye incwadi. Uya kufuna ukugxila kuyilo lwakho, umbutho womxholo wakho, kunye nokukwazi kwawo ukukhuthaza umfundi wakho ukuba athathe inyathelo elilandelayo.
Cwangcisa incwadi yakho -Cwangcisa izihloko eziphambili kunye nemixholo yendalo ngokwendalo ukukhokela umfundi wakho kumxholo. Ngokwam, ndenze oku ngencwadi yam ngokuzoba umzobo weethambo.
Cwangcisa ukubhala kwakho Icandelo elihambelanayo, i-verbiage, kunye nembono (yokuqala, yesibini, okanye umntu wesithathu).
Bhala uyilo lwakho Cwangcisa ixesha kunye neenjongo zokuba uza kuyigqiba njani idrafti yakho yokuqala yencwadi yakho.
Jonga igrama nopelo -Ngaphambi kokuba usasaze okanye upapashe i-ebook enye, sebenzisa umhleli omkhulu okanye inkonzo enje Igrama ukuchonga nokulungisa naziphi na iimpazamo zopelo okanye iigrama.
Fumana ingxelo -Sasaza uyilo lwakho (ngesivumelwano esingachazwanga) koovimba abathembekileyo abanokunika ingxelo kuyilo. Ukuhambisa phakathi Google Docs igqibelele kuba abantu banokongeza izimvo ngokuthe ngqo kwi-interface.
Hlaziya uyilo lwakho Usebenzisa ingxelo, hlaziya uyilo lwakho.
Ukuphucula uyilo lwakho -Ngaba ungafaka iingcebiso, izixhobo, okanye amanani kuyo yonke ikopi yakho?
Yila ikhava yakho -Cela uncedo kumyili wegraphic omkhulu kwaye wenze iinguqulelo ezahlukeneyo. Buza inethiwekhi yakho eyona inyanzelekileyo.
Ixabiso upapasho lwakho -Phanda ezinye iincwadi ezinjengezakho ukubona ukuba zithengisa kangakanani. Nokuba ucinga ukuba ukuhanjiswa simahla kunokuba yindlela yakho yokuyithengisa- kunokukuthengisa ukuthembeka ngakumbi kuyo.
Qokelela ubungqina -Fumana ezinye iimpembelelo kunye neengcali zeshishini ezinokubhala ubungqina kwi-ebook yakho-mhlawumbi nokuba phambili kwinkokeli. Ubungqina babo buya kongeza ukuthembeka kwi-ebook yakho.
Yenza iakhawunti yakho yombhali - Apha ngezantsi uyakufumana iisayithi eziphambili ukwenza iiakhawunti zombhali kunye namaphepha eprofayili apho ungalayisha khona incwadi yakho ye-ebook kwaye uyithengise.
Rekhoda intshayelelo yevidiyo -Yila intshayelelo yevidiyo ebonelela ngesishwankathelo se-ebook yakho ngokulindelweyo ngabafundi.
Phuhlisa isicwangciso sentengiso -Chonge abachaphazeli, iindawo ekuthengiswa kuzo iindaba, abavelisi beepodcast, kunye nabafoti bevidiyo abafuna ukuxoxa nawe ngokwandisa ulwazi ngencwadi yakho. Unokufuna nokubeka intengiso kunye nezithuba zeendwendwe malunga nokuqaliswa kwayo.
Khetha i-hashtag -Yila i-hashtag emfutshane, enyanzelekileyo yokukhuthaza nokwabelana ngolwazi malunga ne-ebook yonyaka kwi-intanethi.
Khetha umhla wokuqaliswa -Ukuba ukhetha umhla wokumiliselwa kwaye unokuqhuba ukuthengisa ngalo mhla wokuqaliswa, unokufumana i-ebook yakho ukuya kwi ethengisa ngokugqibelele ubume bespike sayo kukhuphelo.
Khupha i-ebook yakho -Khulula i-ebook kwaye uqhubeke nokunyusa incwadi ngokubuza udliwanondlebe, uhlaziyo lweendaba ezentlalo, intengiso, iintetho, njl.
Dibana noluntu lwakho -Bonga abalandeli bakho, abantu abaphonononge incwadi yakho, kwaye baqhubeke nokukhawulezisa kwaye bayikhuthaze okokoko unako!
Icebiso Pro: Abanye bababhali abamangalisayo endikhe ndadibana nabo bahlala benomnyhadala kunye nabaququzeleli beenkomfa zokuthenga iikopi zencwadi kwabo bezayo kunokuba (okanye ukongeza) ukubabhatala ukuze bathethe kumsitho. Le yeyona ndlela ilungileyo yokwandisa ukuhanjiswa kunye nokuthengiswa kwe-ebook yakho!
Yintoni ifomathi yefayile ye-EPUB?
Into ephambili ekusasazeni i-ebook yakho kukuyila i-ebook kunye namandla ayo okuthumela ngaphandle ngokucocekileyo kwifomathi yendalo enokuthi isebenzise zonke iivenkile zeencwadi ezikwi-Intanethi. I-EPUB yile mgangatho.
EPUB yifomathi yeXHTML esebenzisa ulwandiso lwefayile .epub. I-EPUB imfutshane upapasho ngekhompyutha. I-EPUB ixhaswa sisininzi sabafundi be-e, kwaye isoftware ehambelanayo iyafumaneka kwii-smartphones ezininzi, iipilisi, nakwiikhompyuter. I-EPUB ngumgangatho opapashwe liQonga leHlabathi loPapasho lweDijithali (i-IDPF) kunye neQela loFundo lweeNcwadi lixhasa i-EPUB 3 njengomgangatho omnye wokukhetha umxholo wokupakisha
Ukuyila i-Ebook yakho kuGoogle Amaxwebhu
Abasebenzisi bahlala bevula Google Docs Kwaye musa ukusebenzisa ezakhelwe kwifomathi yokusebenza. Ukuba ubhala incwadi ye-ebook, kuya kufuneka.
Uyilo olunyanzelisayo isiciko kwi-ebook yakho kwiphepha layo.
Sebenzisa into yesihloko kwincwadi yakho ye-e kwi isihloko Iphepha.
Sebenzisa izihloko kunye nemibhalo engezantsi kwiphepha le-ebook kunye neenombolo zamaphepha.
Sebenzisa isihloko seNtloko 1 kwaye ubhale hlulela kwiphepha layo.
Sebenzisa isihloko seNtloko 1 kwaye ubhale eyakho ukuvuma kwiphepha layo.
Sebenzisa isihloko seNtloko 1 kwaye ubhale ngaphambili kwiphepha layo.
Sebenzisa Isihloko 1 sento yakho izihloko zesahluko.
Sebenzisa Isiqulatho into.
Sebenzisa Imihlathi element kwizalathiso. Qiniseka ukuba unemvume yokuphinda upapashe naziphi na iikowuti okanye olunye ulwazi olushicilelayo.
Sebenzisa isihloko seNtloko 1 kwaye ubhale i Malunga uMbhali kwiphepha layo. Qiniseka ukuba ubandakanya ezinye izihloko ozibhalileyo, amakhonkco akho eendaba ezentlalo, kunye nendlela abanokunxibelelana ngayo nabantu.
Qiniseka ukuba ufaka ikhefu lamaphepha apho kufuneka khona. Xa ufumana uxwebhu lwakho lujonga ngqo ukuba ungathanda ukuba luthini, lupapashe njengePDF kuqala ukubona ukuba ijongeka ngokuchanekileyo ngendlela othanda ngayo.
Amaxwebhu kuGoogle athumela ngaphandle
Usebenzisa uGoogle amaXwebhu, ngoku ungabhala, uyile, kwaye upapashe kuyo nayiphi na ifayile yokubhaliweyo okanye uxwebhu olufakwe ngqo kwiGoogle Drayivu. O-kwaye simahla!
Nantsi indlela yokuThumela ngaphandle i-Ebook yakho usebenzisa iGoogle Amaxwebhu
Bhala isicatshulwa sakho -Ngenisa naluphi na uxwebhu olusekwe kwisicatshulwa olunokuguqulwa lube ngamaXwebhu kaGoogle. Zive ukhululekile ukubhala incwadi yakho kwi Google Docs ngqo, ukungenisa okanye ukuvumelanisa Igama leMicrosoft amaxwebhu okanye usebenzise nawuphi na umthombo kaGoogle Drayivu uyakwazi ukuwenza.
Rhweba ngaphandle njenge EPUB -I-Google Amaxwebhu ngoku ibonelela nge-EPUB njengefomathi yefayile yokuthumela ngaphandle. Khetha nje Ifayile> Khuphela njenge, ngoko Upapasho lwe-EPUB (.epub) kwaye ukulungele ukuhamba!
Qinisekisa i-EPUB yakho -Ngaphambi kokuba ulayishe i-EPUB yakho kuyo nayiphi na inkonzo, uya kufuna ukuqinisekisa ukuba ifomathiwe ngokufanelekileyo. Sebenzisa i-intanethi Isiqinisekiso se EPUB ukuqinisekisa ukuba awunangxaki.
Apho ukupapasha i-EPUB yakho
Ngoku ukuba unayo ifayile yakho ye-EPUB, ngoku kufuneka upapashe i-Ebook ngenani leenkonzo. Iivenkile eziphambili zokuthathwa kwabantwana zezi:
Uhlobo lokushicilela ngokuthe ngqo -Zipapashe ii-eBooks kunye namaphepha asimahla nge-Kindle Direct Publishing, kunye nokufikelela kwizigidi zabafundi kwiAmazon.
Iapile yokuPapasha iiNcwadi kwiApple Indawo enye yazo zonke iincwadi ozithandayo, kunye nezo sele uza kuzenza.
Iincwadi zeGoogle Play -Into edityanisiweyo ngaphakathi Ivenkile ebanzi kaGoogle.
Smashwords -Umsasazi omkhulu weencwadi ze-indie emhlabeni. Siyenza ikhawuleze, isimahla kwaye ilula kuye nawuphina umbhali okanye umshicileli, naphina emhlabeni, ukupapasha nokusasaza ii-ebook kubathengisi abaphambili nakumawaka eelayibrari.
Ndingacebisa kakhulu ukurekhoda ividiyo ukwazisa incwadi yakho, setha ulindelo kumxholo, kwaye uqhube abantu ukuba bakhuphele okanye bathenge incwadi yeencwadi. Kwakhona, yenza umbhali omkhulu kuyo nayiphi na inkonzo yokupapasha evumayo.
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa ikhonkco lam lokudibana Indawo yokusebenzela kaGoogle.
tags: AmazonIincwadi zeAmazonAndroidapileIincwadi zeapileebookzasemoyeniepubukuguqulwa kwe-epubUmguquleli we-epubIsiqinisekiso se-EpubUkupapashwaGoogle DriveIincwadi zeGoogle Playkwenziwa kanjaniIvenkile yeeBooknomlilonkululekopapasha incwadipapasha ebupxhtml
Iposi enkulu, Thanx!
Ngomhla wama-9 ku-Disemba 2015 ngo-8: 17 PM
Ngaba singenza incwadi kuGoogle docs?
Ngomhla wama-10 ku-Disemba 2015 ngo-12: 07 AM
Ndiyakholelwa ukuba bayinto enye ngoku, Maryam!
Jan 22, 2021 kwi-9: 55 AM
Oku kubaluleke kakhulu. Kanye le bendiyifuna ngoku.
I-Purna Lal Chakma
Mar 20, 2021 ngo-4: 49 AM
Kakhulu. Iluncedo ngokumangalisayo. Enkosi kakhulu 🌹
Meyi 25, 2021 kwi-7: 35 PM
Ndinamaphepha angama-300 aneefoto ezincinci kwiphepha ngalinye. I-pub eqinisekisa ithi ingaphantsi kwe-12MB. Ngaba iiggs zam zamagogo ziya kuba nkulu kakhulu. Ndizinciphisa njani iifoto. Banqunqiwe kodwa ifoto iphelele ikhona ..
Juni 2, 2021 ngo-12: 50 PM
Kukho inani lezixhobo ezikwi-intanethi ezinciphisa ubungakanani bomfanekiso, kodwa ubukhulu becala zikukuphuma komgangatho kwesikrini… eyi-72 dpi kwisiphelo esisezantsi. Izixhobo ezitsha ziyi-300 + dpi. Ukuba umntu unqwenela ukuprinta i-ebook yakho, i-300dpi ilungile. Ndiza kuqinisekisa ukuba ubungakanani bomfanekiso wam abukho bukhulu kunobungakanani bexwebhu (ke sukuyifaka kwaye uyinciphise… uyilinganise kwakhona ngaphandle kwe-ebook yakho, emva koko uyincamathisele apho). Emva koko cinezela umfanekiso. Isixhobo sokucinezelwa komfanekiso endisisebenzisayo Kraken.